नरैनापुर – Himalaya Television
बाँकेको नरैनापुरका आगलागी पीडितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था (भिडियो रिपोर्टसहित)
२३ चैत २०७७ बाँके । बाँकेको नरैनापुरमा शनिबार भएको आगलागीमा परेर घरबारविहीन भएका ६८ परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि टेन्ट र खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ । आगलागीमा परेर ६८ घर परिवारका १ सय २० घरटहरा ध्वस्त भएका थिए ।...
बाँकेको नरैनापुरमा भीषण आगलागी, हेर्दाहेर्दै १२० बढी घर जलेर खरानी (भिडियो रिपोर्टसहित)
२१ चैत २०७७ बाँके । बाँकेको नरैनापुरमा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागीबाट एकसय २० घर जलेका छन् । आजलागीबाट तीनजना घाइते भएका छन्। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर चार खोदावामा दिउँसो पौने चार बजे लागेको आगोका कारण अहिलेसम्म १२० घर...
बाँकेको नरैनापुरमा आगलागी हुँदा १६ घर जले
२४ फागुन २०७७ बाँके । बाँकेको नरैनापुरमा आगलागीबाट १६ घरमा क्षति पुगेको छ । नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ सुइयाका मनिजर पासीको फुसले छाएको घरमा अचानक सल्किएको आगोले नजिका १६ घरमा क्षति पुगेको हो । प्रहरी, स्थानीय बासिन्दा र...
बाँकेको नरैनापुरमा खटिएको नेपाली सेनाको टोली नेपालगञ्ज फिर्ता
१७ साउन, २०७७, बाँके । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भएपछि बाँकेको नरैनापुरमा खटिएको नेपाली सेनाको टोली नेपालगन्ज फर्किएको छ । क्वारन्टिनमा रहेका सबै जनाको स्वाब संकलन गरी परिक्षण गर्दा रिपोट नेगेटिभ आएपछि घर फर्किएका छन् । नरैनापुरका १५ वटै क्वारन्टिन...
एकाएक हटस्पट बनेको नरैनापुरमा कसरी भयो कोरोना नियन्त्रण ?(भिडियोसहित)
१ असार, २०७७ नेपालगञ्ज । भारतबाट फर्कने युवाको संख्या घट्दै गए पछि बाँकेको नरैनापुरका १५ वटा क्वारन्टिनस्थल मध्ये ११ वटा बन्द भएका छन । क्वारन्टिनमा बस्नेको संख्या ७ हजार ८ सयबाट घटेर करिब १ सयमा झरेको छ । जेठमा...
नरैनापुरको क्वारन्टिनः रोग निको होलाभन्दा सर्ला भन्ने त्रास !
१४ जेठ, २०७७, नेपागञ्ज । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भएको स्थानीय तह हो । यो गाउँपालिकामा १ सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । नरैनापुरका १५ वटा क्वारन्टिनमा अझै झण्डै ६ सयजना छन् । तर...